Wasiir Sacad Cali Shire Oo Iska Hor Iyo Daba Yimid, Wixii Uu Dorraad Qirayayna Shalay Beeniyey. | Baligubadlemedia.com
Wasiir Sacad Cali Shire Oo Iska Hor Iyo Daba Yimid, Wixii Uu Dorraad Qirayayna Shalay Beeniyey.
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Somaliland Md. Sacad Cali Shire waxa uu siyaalo kala duwan uga hadlay hadalkii uu saxaafadda siiyay dorraad iyo hadalkii uu mar kale shalay saxaafadda mariyay isaga oo dorraad afaafka Golaha wakiillada kula sugnaa Xildhibaan Ibraahim Mahdi Buubaa oo uu sheegay in uu xildhibaanku dhammeeyey wixii ay ka wada hadleen halka uu shalay sheegay in wixii uu Xildhibaan Buubaa ka hadlay gabi ahaanba aanay ka wada hadal sidoo kalena aan xukuumaddii hore ee Axmed Siilaanyo aanay ka tagin wax dayn ah sida uu hadalka u dhigay, wakhti shacabka Somaliland si weyn u hadal hayaan daynta 80 Xildhibaan Ibraahim Mahdi Buubaa oo ah Guddoomiyaha Guddida
Dabagalka Hantida Qaranka ee Golaha wakiilada Somaliland oo ay dorraad Wasiir Sacad ay saxaafadda la wada hadleen waxa uu sheegay in Wasiirku Guddida daba galka Hantida qaranka u sheegay in xukuumaddan cusub ee Madaxweyne Muuse Biixi ay la daalaa dhacayso dayn lacageed oo dhan 80 Milyan oo Dollar oo ay xukuumaddii hore kaga tagtay taasi oo aanu markaasi Wasiir Sacad waxba ka odhan sheegayna in wixii ay ka wada hadleen xildhibaanku dhammeeyey balse waxa umadda layaab ku noqotay markii uu shalay Wasiir Sacad saxaafadda la hor yimid hadal kii hore ka duwan oo ah in uu beeniyo wixii uu dorraad Xildhibaan Ibraahim Mahdi Buubaa ka hadlay.
Wasiir Sacad ayaa shalay isaga oo arrintii Xildhibaan Buubaa beeninaya waxa uu yidhi: “Deyntaasi ma jirto mana qiran anuu. Laakiin haddii aan faahfaahin ka yara bixiyo sida war-saxaafadeedku ku yimid. Wasaarad ahaan waxa Golaha nagu marti qaaday Guddida Daba Galka Hantida Qaranka si aanu uga wada hadalno warbixintii Hanti-dhawrku ka bixiyay miisaaniyaddii 2017-kii iyo talooyinkii guddida. Runtii waxa uu ahaa shir aad u wanaagsan. Waxaanu isla eegnay arrimo badan oo ay ka mid yihiin maareynta daynta, diiwaan galinta hantida, maaraynta miisaaniyadda madaxyadeeda, arrimahaasi iyo kuwo kale waanan isla garanay. Waxa kale oo aanu isku waafaqnay in arrin walba sharcigu sida uu odhanayo loo maareeyo oo loo maro. Markii dambe ee aannu soo baxnay ee aannu hor nimid saxaafadda oo ay ahayd in aannu intaasi uun ka sheegno ayaa xildhibaanku runtii waxa uu ku daray arrimo aannaan ka wada hadlin oo aan jirinna. Waxyaabaha aan jirinna waxa ka mid ahaa arrinkaa 80-ka Milyan ee Dollar. Markaa cid wax innagu leh oo bangiga dunida ah ama baanan kale ah. Dee Runtii in aannu fagaare ku yooyootanno ma aha. Waa laga qurux badan yahay. Anigu waxa aan sheegay waxa jira. Isagu (Ibraahim Buubaa) tiro ayuu sheegay balse tiradaasi sax ma aha. Ma garanayo runtii. Waxa laga yaabaa siyaasadda ayaa jiidatay malaha. Laakiin wax aannu ka soo wada hadalnay may ahayn”.
Iyaba waa arrin layaab lehe Wasiir Sacad muxuu haddaba dorraad arrinkaasi ka yidhi waakan hadalka Wasiirku markii uu Xildhibaan Buubaa kula sugnaa Golaha Wakiilada waaakan hadalkiisii: “Waxaanu kulan la lahayn hanta-dhawrihii warbixintii uu ka soo qoray Xisaab xidhkii Miisaaniyaddii 2017. Runtii qodobadii aanu ka wada hadalnay waxa dhammeeyey Xildhibaanka oo ka hadlay. Waxaan doonayaa in aan halkan uga mahad celiyo wada shaqaynta wanaagsan ee aanu leenahay. Wixii aannu ka wada hadalnay waxa dhammeeyey xildhibaanka laakiin guud ahaan waxaanu ka wada hadalnay maamulka hantida ma guurtada ah, maaraynta daynta, maaraynta maamulka miisaaniyadda, waxa aannu isla garanay oo aan anuu ballan qaaday wasiir ahaan anuu maan joogin 2017-kii imika laba bilood iyo badh baan joogaa, in loo maamulo oo loo raaco hantida qaranka wax kasta oo la xidhiidha sida sharcigu dhigayo gaar ahaan sida dastuurku dhigayo ”.
Warkan oo uu qoray Wargayska Foore ayaa sheegay in Shacabka Somaliland si weyn isu waydiinaya xaaladdan oo ay in badani ku tilmaantay mid faashil ah oo Wasiir Sacad ku dambabasayo arrin uu markii hore dorraad wax ka ogaa balse markan dambe uu ka noqday.